သဒ္ဓါလှိုင်း: December 2012
ရူးသွပ်ရင် ဖြစ်မယ် (တဂ်ပိုစ့်)
လူ့ဘဝ ဖြစ်တည်လာတဲ့ အခိုက် ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးအရွယ်ကစပြီး နေ့စဉ် ကျင်လည်နေရတဲ့ လောက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေသားတကျဖြစ်အောင် နေတတ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြရတယ်။ ဘဝရပ်တည် ရှင်သန်ဖို့ အတွက် ရုန်းကန် လှုပ်ရှားနေကြရတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် အဝန်းအဝိုင်းကို လှပအောင်လည်း တန်ဆာ ဆင်ကြရတယ်။ မိသားစုကိုလည် နွေးထွေး ပေးကြရတယ်။ မိမိ တန်ဖိုးထားရတဲ့ သူတွေအတွက် နှလုံးသားနဲ့ အုပ်မိုးပြီး မေတ္တာတရား ပေးကြရတယ်.။
တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ငယ်ဘဝမှာ ရူးသွပ်တဲ့ အရာတွေ ရှိခဲ့ကြပါတယ်..။ မိမိ စိတ်တည်ရာကို လုပ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ ကြိုးစားခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ တကယ့်ကို လုပ်ချင်တာတွေကို ရူးသွပ်စွာနဲ့ လုပ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ တချို့သူတွေရဲ့ ငယ်ဘဝရူးသွပ်မှုက ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် မှေးမှိန် သွားခဲ့ရတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိသားစုရဲ့ အလိုအရ ပြောင်းလဲခဲ့ ကြရတယ်.။ ကျေးဇူးတရားတွေရဲ့ လွန်ဆွဲမှုကြောင့် ဝေးခဲ့ကြရတယ်။
တခါတရံမှာ ငယ်ဘဝထဲက ရူးသွပ်စွာ ရှိလာခဲ့တဲ့ အရာတွေက အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ လျော့ပါး သွားတတ် ကြတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်. အဲဒါကို တကယ့်ရူးသွပ်မှု မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရင်လည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့ မှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။ ငယ်ဘဝမှာ မိမိရဲ့ ရူးသွပ်မှုက ပကာသနမပါပဲ အရောင်ဆိုးမထားတဲ့ အဖြူရောင်တစ်ခု ဖြစ်နေလို့ပါ.။
အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ မိမိ ရူးသွပ်တဲ့အရာတွေက ဘယ်လိုအသုံးဝင်ပြီး အကျိုးပြုမလဲ.။ မိမိတစ်ယောက်ထဲအတွက် အကျိုးပြုမှာလား. တပါးသူတွေအတွက် အကျိုးရှိမှာလား. လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးအတွက် အကျိုးပြုနိုင်မလား. မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ထုတ်နေမိတယ်.။ မိမိ ရူးသွပ်ခဲ့ရတဲ့ ရူးသွပ်မှုက အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ အရာဖြစ်ခဲ့မယ်. ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့မယ်. တကယ့်ကို ရူးသွပ်ခဲ့ရတယ်အရာဆိုရင် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး.။ အနည်းဆုံးတော့ မိမိရူးသွပ်မှုက သူတပါးအတွက် အဆိပ်အတောက်မဖြစ်ပဲ မိမိတကိုယ်စာ စိတ်ချမ်းမြေ့မှု ရှိနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း မိမိရဲ့ ရူးသွပ်မှုက အကျိုးရှိတဲ့အရာ တစ်ခု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.။
ဘဝရပ်တည်ရေးအတွက် မိမိရဲ့ ရူးသွပ်မှုတွေနဲ့ ဝေးကွာခဲ့ကြရတယ်.။ တချို့သူတွေရဲ့ ရူးသွပ်မှုက ဘဝရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက် လမ်းကြောင်းပေးနိုင်တဲ့ အရာမျိုး ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်.။ ဆန္ဒပြည့်ဝတဲ့ ရူးသွပ်မှု တခုပေ့ါ..။
တချို့သူတွေက မိမိရဲ့ ရူးသွပ်မှုကိုပဲ ဦးစားပေးပြီး ဘယ်လိုအခက်အခဲဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်မနေ ကြိုးစားခဲ့ကြသူတွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သူတို့က သူတို့ရဲ့ စိတ်ကို လွတ်လပ်တဲ့ စိတ်နဲ့ အုပ်မိုးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူတွေပေ့ါ..။ တခြားသော အရာတွေထက် မိမိရူးသွပ်မှုကိုသာ အလေးထားပြီး လုပ်ခဲ့ကြလို့ အောင်မြင်မှုတွေရှိသလို ရုန်းကန်နေကြဆဲ သူတွေလည်း ရှိကြတယ်.။ ရုပ်ဝတ္ထု ပစ္စည်း မကြွယ်ဝရင်နေပါစေ စိတ်ချမ်းသာပြီး လွတ်လပ်မှုတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းနေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ရမယ့် သူမျိုးတွေပေ့ါ.။
အခြေအနေ၊ အချိန်အခါ၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေနဲ့ မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ လောကအခြေအနေကြောင့် မိမိရဲ့ ရူးသွပ်မှုတွေကို ဘေးဖယ် ထားခဲ့ ကြရတယ်။ မမေ့နိုင်ပေမယ့် မေ့ပျောက်ချင်ဟန်ဆောင် နေခဲ့ကြရတယ်။ ရူးရူးသွပ်သွပ် ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေကို မျိုသိပ်ခဲ့ကြရတယ်။ လက်တွေ့ ရင်ဆိုင်ရမယ့် လောကဓံကပေးတဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ လုံးထွေးနေခဲ့ရတယ်.။ အဲဒီအချိန်မှာ မိမိရဲ့ ရူးသွပ်စွာရှိခဲ့တဲ့ အရာကို တခြားသော သူတွေအတွက် .. ဒါမှမဟုတ် မိမိရဲ့အတ္တအတွက် ဖုံးလွှမ်းခဲ့ကြရတယ်.။ မိမိရဲ့ ရူးသွပ်မှုတွေကို ဘဝရှင်သန် ရပ်တည်ရေးဆိုတဲ့ ပကာသန မှုံနံသာတွေနဲ့ ချယ်ထားခြင်းခံခဲ့ကြရတယ်။
အဲဒီလို မိမိအတ္တ၊ သူတပါးတွေရဲ့ အတ္တတွေကိုသာ မိမိရဲ့ ရူးသွပ်မှုနဲ့ ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လောကကြီးကို အောင်နိုင်ပြီး မိမိရဲ့ စိတ်ကို မိမိ အောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီလေ..။
လူသားတိုင်း မိမိ ရူးသွပ်ခဲ့ရတဲ့ ရူးသွပ်မှုတွေနဲ့ လှပစွာ တန်ဆာဆင်နိုင်ကြစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း...။
ဆရာဝေမိုးနိုင် (မုံရွာ) ရဲ့ "ရူးသွပ်ရင် ဖြစ်မယ်" တဂ်ပိုစ့်လေးကို အချိန်အတော်ကြီး ကြာမှ ရေးခဲ့ရတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 4:09 PM 11 comments: